प्रकाशित मिति: 2019/06/02
जेठ १९ काठमाण्डौ । केही दिन अघि गन्तव्य नेपालको १५ औं बार्षिकोत्सवमा पर्यटन पुरस्कारबाट सम्मानित हुँदै गर्दा आशुतोष प्रधान दंग देखिन्थे । युवा जोस, टिलिक्क टल्कने सेतो चस्मामाथिको निधारमा कोट्याउँदै गर्दा उनको खुसी लटरम्म देखिन्थ्यो ।
तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मिएका हुन आशुतोस । विगत ५ बर्षयता होटल बन्दीपुर अर्गानिक होम सञ्चालन गरिरहेका छन भने अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ, बन्दीपुर बगैचा ।
बिशेषतः कृषि, संस्कृति, अध्यात्म, स्वास्थ्य र खेलका बिबिध पक्षलाई समेटेर बन्दीपुर बगैचाको स्वरुप तयार हुँदैछ । बन्दीपुर बगैचा आफैमा होटलको नाम हो, जसमा यी पञ्च व्यञ्जनलाई यसका बिशेषताको रुपमा प्रश्तुत गरिएको छ ।
६० रोपनी क्षेत्रफलमा जंगलको बिचमा अवस्थीत उक्त बगैचामा २०० जना अट्ने सेमिनार हल, ढुंगेधारा, चिसो हावापानी, प्राकृतिक खानपान, रिट्रिट सेन्टर, योगा प्रणायम, फलफुल, बाख्रा, हाँस, कुखुरा पालन, पौडी पोखरी सम्पुर्णको संगम हो, बन्दीपुर बगैचा ।
उसो त, यसभन्दा अघि नै काठमाण्डौ र पोखरामा उनले पहिले नै होटल सञ्चालनमा ल्याएका थिए । भुकम्पपश्चात काठमाण्डौबाट बिदा भए ।
सानै उमेरमा व्यावसायमा हात हालेका प्रधानको परिवार बन्दीपुरको चल्तापुर्जा नै हो । गाँउमा उनका हजुरबुवा प्रधानपञ्च हुँदा छाडेको छाप अझै जिबित नै छ ।
सँगैका साथीहरु भविश्य खोज्दै अष्ट्रेलिया, अमेरिका पलायन हुँदै गर्दा उनी प्रदेश फेरिएला तर नेपाली मन फेरिदैन उनले भने ।
चाडपर्वमा बिदेसिएकाहरु पनि घर फर्कन्छन, गाँउमा खोज्दै आईपुग्छन, गफगाफ रमाईलो हुनेनै भयो ।
तपाई साथीहरुमाझ लोकप्रिय हो,‘ उनीहरु नेपालमा टिक्न नसकेर बिदेशमा व्लुकलर जबमा रमाईरहेका छन, कम्तिमा म त देशमै बसेर पर्यटन क्षेत्रमा स्वरोजगारको बाटो खोजिरहेको छु । के गर्दै छ, यो भन्ने उनीहरुलाई पनि त पर्ला नी
जिबन रमाईलै छ, बाँच्न जान्ने मनहरुलाई । देश बिदेश घुमेकै छु । केटाहरु भेट्न आउँदा हल्का रमाईलो भन्छन नी त्यो पनि हुन्छ, नै । जहाँ जता जानुपर्ने हो गईसकें घुमिसकें । अझै जानुपर्ने भए जाउँला । तर देशमै बसेर आफ्नो पहिचान बनाउनु चै पर्छ । कुरा यही हो ।
पैसा कमा... छस, अनि भन्छस, भन्छन साथीभाईहरु । अरेबाबा पहिला जोस देखाउ, पैसा आफै आउँछ । मैले कमाको जोस हो । त्यसोभए, अब पर्यटन क्षेत्रको राजनीति गर्ने की ?
अरे बा कुरा छाड्नुस, यहाँ स्वतन्त्र मान्छेलाई कसैले गन्दैन । भिटोफमा चुनाब लडेको तैपनि हराईदिए ।
ए बाबा, पर्यटन बिषयमा डिग्री हासिल गरेर आएको हुँ, ठाँउ ओगट्नको लागि मात्र हैन, थोरबहुत योगदान त हुनसक्थ्यो, तर त्यसो भएन, यहाँ भोटो फटाएका हरुको सिण्डिकेट छ, हरेक क्षेत्रमा, पर्यटनमा नहुने कुरै भएन ।
पोर्टर बाट बिज्ञ बन्न खोज्ने यो कस्तो चलन हो ? अनि तिनै मान्छेले पर्यटक तान्न मन्दिर देखाएर हल्ला गर्छन । सिर्जनशिलता हुनुपर्यो नी, केही सिकेको हुनुपर्यो, पुरानो ढर्रामा केही हुने वाला छैन, फेरी पनि उनीहरुकै अल्पज्ञानी आतंक पर्यटनबजारले खेपिरहेको छ । पर्यटन उँभो नलाग्नु कारण यही हो ।
पानीको धनी देश भन्ने भेनेजुएलाबाट पानीका बोतल आयात गर्ने, पोखरा घुम्न गएको पर्यटक बेलुकी ५ बजे स्वदेश फर्कन चाह्यो भने समयमा एयरपोर्ट पुग्ला की नपुग्ला चिन्ता गर्नुपर्ने देशमा २० लाख पर्यटक भित्राउने कुरा पनि सस्तो मजाक हुनसक्छ, गर्न चाहदा नहुने होईन, तर यहाँ हुन दिईदैन । समस्या यहीनेर छ, सबैको चेतना भया ।